Usebenzisa njani ii-Subdomains kwiWebhu yakho yeWebhu
Ifayile yeNdawo ye-DNS ebanjwe ligama eligunyazisiweyo lesizinda ngokwenene ibanzi, kwaye ungayisebenzisa ngendlela engeyiyo usebenzisa iziqendwana Qwalasela icala le-Intanethi elibonakalayo kubasebenzisi bewebhu kwaye bakubonise indlela ezisebenza ngayo ii-subdomains (kwaye unokuyiphucula iwebhusayithi yakho.
Yenza ubuchule kunye ne-subdomains kwi-DNS yakho
I-FQDN ifuna igama lenginginya kunye negama lesizinda. Oku kuthetha ukuba naliphi na igama lesizinda linokwahlulwa libe ngamacandelwana amaninzi.
Yifane nomfanekiso njengesakhiwo sokuhlala- hayi nje nasiphi na isakhiwo esidala, nokuba sisakhiwo esineflethi.
Umgangatho wokuqala wesakhiwo unendawo evulekileyo eneendawo zokuhlala kunye neziphungo ezikhoyo. Yindawo eqhelekileyo enokusetyenziswa ngabo bonke abahlali kunye neendwendwe kumagumbi.
Ukuba umntu othile ukuxelele ukuba uhlala e-123 Example Street, Exampleton, ungacinga ukuba xa ufika kufuneka ungene emnyango wangaphambili ukuze umfumane. Nangona kunjalo, kwesi sakhiwo sigcwele indlu esinokukusa kwindawo yoluntu kumgangatho wokuqala. Ukufumana eyona ndawo yokuhlala, kuya kufuneka uyazi inani elithile lendlu.
Ke idilesi epheleleyo iya kuba yi-Apartment 45, 123 Example Street, Exampleton. Emva kokuba unale ichanekile, idilesi epheleleyo ungaya ngqo efulethini.
Oku kuyinyani nakwiiwebhusayithi. Ukuba unika umntu idilesi yewebhusayithi yakho ngaphandle kwegama lomphathi ekuqaleni, kufana nokubonelela ngedilesi yendawo yokuhlala ngaphandle kwenombolo yendawo ohlala kuyo. Kulungile ukuba uhlala endlwini kunakuhlala (okanye, ngokwemiqathango yewebhusayithi, ufuna kuphela indawo ukuba ibe negama lomamkeli elingagqibekanga).
Nangona kunjalo, ukuba bhetyebhetye kwe-DNS kuthetha ukuba nangaliphi na ixesha unokwenza i-subdomain ngokwenza igama elitsha lenginginya, unokuba neyesibini, eyesithathu, neyesine (njalo njalo) kwiwebhusayithi yonke phantsi kwegama elinye lesizinda.
Umzekelo, ungaguqula iphezulu lendlu yakho ibe yindawo yokuhlala unyokozala. Uninazala unokufumana iposi yakhe kwaye anike eyakhe idilesi njengeNdlu A, 456 iSampula yesitalato , Umzekelo.
Kwangokunjalo, yithi uqhuba iwebhusayithi yeqela lebhola lakho,Umzekelofootballteam.com, Kwaye umqeqeshi uthatha isigqibo sokuba ufuna ukuba nebhlog yakhe. Unokwenza isizinda esinegama laso lenginginya umqeqeshi , ezakumnika idilesi yakhe eyahlukileyo yokwenza indawo yakhe, isephantsi kweambrelaUmzekelofootballteam.com.
Cebisa vs tylenol ngentlungu
Kulo mzekelo, i-FQDN yeblogi yomqeqeshi iya kubaumqeqeshi.examplefootballteam.com.
Zombiniumqeqeshi.examplefootballteam.comkwayewww.examplefootballteam.comzii-FQDNs, oko kuthetha ukuba zombini zahlukile kwaye ke zinokukhomba kwiindawo ezahlukeneyo kwi-intanethi.
Kwithiyori, unokuba ne-subdomains ezininzi kangangoko ufuna phantsi kwesizinda sakho, kodwa ezinye zewebhu ezingabizi kakhulu zinokunciphisa inani elona liphezulu ekuvumela ukuba udale.
Unokufumana uyilo ngendlela othanda ngayo ii-subdomain zakho kwaye unqunyelwe kuphela ngengcinga yakho kunye neemfuno zakho. Abanye abantu abaze bafune i-subdomain, ngelixa abanye benza umjelo obonakala ungenasiphelo kubo.
Ukufumana nje iijusi zakho zokuyila, olu luhlu lulandelayo lubandakanya iimbono ezimbalwa zendlela onokufuna ngayo ukusebenzisa ii-subdomains:
Usenokuba uthenge i-domainigama lakhokwaye ndenze iwebhusayithi yakho apho. Emva koko unokufuna ukunika abantwana bakho ithuba lokuba babe neewebhusayithi zabo kwaye ke wenze i-subdomain yabo bonke-umzekelo,Sandra.yfamilyname.com,UFilipu.igama lakho losapho.com, kunyeUAlex.yfamilyname.com.
Iwebhusayithi yenkampani yakho inokubazdengome, kwaye unokufuna ukwenza enye indawo apho unika khona inkxaso kwiimveliso zakho, onokuzibizasupport.yourawesomebusiness.com. Unokuba unqwenela ukwenza enye indawo apho uneforum yabathengi bakho ukuba bathethe ngendlela ezoyikeka ngayo iimveliso zakhoforum.yourawesomebusiness.com.
Yitsho igama lakho nguGemma kwaye uchithe lonke ixesha lakho ulisebenzisa ekwenzeni ubugcisa kunye nezokwakha iwebhusayithi eyabizwagemmasartsandcrafts.comukubonisa abantu ezinye zezinto zakho ezintle.
Kuphela kusemva kokuba uqale ukwakha isiza apho waqonda khona ukuba iimodeli zepapier-mâché ozenzileyo azinamdla kangako kubantu abanomdla wokuthunga okanye ukupeyinta ioyile. Unokwenza iisayithi ezahlukileyo kuhlobo ngalunye lobugcisa, nganye inesizinda sayo, njengeUkupeyinta ioyile.gemmasartsandcrafts.comkwayeNgobuchule.gemmasartsandcrafts.comkunye nokufumana indawo yakho ephambili kwigemmasartsandcrafts.com.
Uyenza njani i-subdomain entsha ye-DNS
Uninzi lweepaneli zolawulo zibonelela ngendlela elula yokwenza i-subdomains entsha.
Inkqubo yokumisela isiseko esincinci ngokufanayo iyafana kwiiphaneli zolawulo. Njengomzekelo, nantsi indlela oyenza ngayo kwiCanel:
Ngena kwi-cPanel ngeenkcukacha zomamkeli wakho xa uvula iakhawunti.
Skrolela kwicandelo leMimandla kwaye ucofe ii-Subdomains.
Chwetheza igama le-subdomain entsha ofuna ukuyenza ebhokisini.
Khetha idomeyini ofuna ukuyenzela i-subdomain.
Nayiphi na indawo eyongeziweyo okanye imimandla emiselweyo oyicwangcisileyo iya kufumaneka kwi-drop-down box.
Ukuba uyafuna, chwetheza indlela eya kwingcambu yoxwebhu lwesizinda.
Ngokuzenzekelayo, inkqubo ikhetha / public_html / TheSubdomainYouTyped, kodwa ungayitshintsha ukuba uyafuna.
Yenza hayi tshintsha ingcambu yoxwebhu ngaphandle kokuba uqinisekile ukuba uyayazi into oyenzayo. Ukutshintsha ingcambu yoxwebhu kunokwenza ukuseta kudideke kakhulu.
Indawo engezantsi ibonisa kuluhlu olusezantsi kwephepha. Ungayisusa ngokunqakraza Susa okanye, ukuba ufuna njalo, ungayithumela kwakhona.
Ukuba ufuna ukuhambisa kwakhona isizinda esincinci kwisizinda, kuso kufuneka kuqala ukuseta njenge-subdomain, nokuba kungenxa yenkqubo ezenzekelayo okanye ngesandla. Ngaphandle koko i-DNS ayazi ngobukho bayo kwaye ukuqondisa kwakhona akusebenzi.
Utshintsha njani iiSetingi zoHlaziyo lweWindows
Iziseko zoQeqesho oluPhezulu oluPhezulu
Ungayibonisa njani i-Elektroni kuLungiselelo loqwalaselo lwe-Electron
Uyenza njani i-Windows 8 Taskbar
I-Dextromethorphan kunye ne-guaifenesin
Usebenza njani Windows 10 Umsebenzi weDesktop?
Uyilungelelanisa njani imifanekiso kwiWordPress yakho.Org Blog
Ukwaphuka kwengalo kuBantu abadala
Uyipapasha njani iVenkile yeAmazon yeAustralia
Ukutya okuyi-tonsillectomy imihla ngemihla
perioral dermatitis ngaphezulu kwekhawuntareti yonyango
phentermine 37.5 iziphumo ebezingalindelekanga
Itshathi yobushushu bomzimba ebantwaneni
ungayitshintsha njani ivili
i-otc yesini se-herpes cream
ugcino windows 10 kwi-usb